2020မှာ ရန်ကုန်ရဲ့instagrammable Cafeဆိုင်လေးများ – LODGGY
2020မှာ ရန်ကုန်ရဲ့instagrammable Cafeဆိုင်လေးများ
ကော်ဖီဆိုင်လေးတွေ Desertဆိုင်လေးတွေကို ဘယ်လိုအချိန်မှာ သွားသင့်လဲ?
​အရသာရှိတဲ့ကော်ဖီတစ်ခွက်ကိုအရမ်းတောင့်တနေတဲ့အချိန်ရယ် ဒီနေ့ကိုယ့်ကိုကိုယ် တအားချောနေတယ် ထင်တဲ့အချိန်ရယ်ပါ။ 🤣
ဒါ့ကြောင့် Lodggy.com က ယူလေးတို့အဆင်ပြေပြေ date လို့ရ chill လို့ရအောင် ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ခေတ်ရှေ့ပြေးနေတဲ့ မော်ဒန်ကော်ဖီဆိုင်အလှလေးတွေကို လမ်းညွှန်ပေးချင်ပါတယ်။
1.Origin Coffee & Roastery
Origin Coffee & Roastery ©lodggy.com
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်တန်းတွေရှိတဲ့အရပ် ရှမ်းပြည်နယ်မှထွက်တဲ့ သဘာဝကော်ဖီစေ့အစိမ်းတွေကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ Roasting Machine နဲ့ Roast လုပ်ထားပါတယ်။ အစားအသောက်တွေမှာ အရသာရှိပြီး ဆီမပါသလောက်နည်းတယ်ဆိုတဲ့ ထူးခြားချက်လေးက ဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်။ ဆီနည်းလွန်းတဲ့ Burmese Samosa ရယ် Chicken Wings နဲ့ Rice Burger ကို ဆိုင်ရောက်ဖြစ်ခဲ့ရင် try ကြည့်ကြပါ။
​ညနေနေစောင်းရင် ပိုလှတတ်လို့ကြင်နာသူကိုခေါ်သွားဖြစ်အောင်ခေါ်သွားပါ။ မရှိတဲ့သူတွေကတော့ ဓာတ်ပုံပဲရိုက်ကြပေါ့ 🥴
လိပ်စာ – ကမ္ဘာအေးလမ်းမပေါ် The Central Boulevards မှာပါ
2. JJ Cafe
A post shared by choux_april (@nabi_april) on Mar 6, 2020 at 3:42am PST
Just For you လို့ အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ ဒီဆိုင်လေးက ရန်ကုန်မြို့မှာ hot နေပါတယ်။ ဆိုင်ရဲ့Decoration Floral Pink Theme ရယ် ချိုအီညက်ညောတဲ့ Desert တွေရယ်က သင့်ကို Seoul မြို့ကို ခေါ်သွားမှာပါတဲ့။
အိတုန်ပြီး စိမ့်စိမ့်ငန်တံလေးဖြစ်နေတဲ့ Pancake က ဒီဆိုင်ရဲ့နာမည်ကြီးပါ။ ice cream ကလဲ နူးညံပြီး Pancake ကို fruit တွေ Yogurt တွေနဲ့ တွဲပြီးစားရတဲ့အရသာက အရမ်းကိုပျော်ရွှင်စေမှာပါ။ Toast တွေ Juice တွေ တခြား Desert တွေလဲ ရနိုင်ပါတယ်။
လိပ်စာ – Junction City 3rd floor
3.Locale Café Central
I need to re- dye my hair 🤦🏻‍♀️#potd #ootd
A post shared by Mira Rukia (@mira_the_grumpy) on Sep 26, 2019 at 3:16am PDT
Breakfast တွေ Salads တွေ Bowls တွေပါရတဲ့ Cafe ဆိုင်လေးပါ။Bowls တွေဆိုလဲ Base တွေအမျိုးမျိုးနဲ့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အရသာ တွေရွေးယူရပါတယ်။ Healthy Food တွေဖြစ်ပြီး တကယ့်ကို International and European style Cuisine တွေမို့ try ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
Coffee တွေ Cocktail တွေလဲ ရနိုင်ပြီး Avocado Toast ကတော့ ဆိုင်ရဲ့ နာမည်ကြီးလေးပါ။
လိပ်စာ ကမ္ဘာအေးလမ်းက Central Boulevard မှာပါ။
"A journey ofathousand miles continues with the second step." We thank everyone who have made the dream of the second stepareality. Our second shop is located at Marketplace by City Mart – 6.5 Mile, Pyay Road. We open from9am to9pm tomorrow. More food to come soon .. #myanmarfood #traditionalfood #localgood #fusionfood #delish #foodstagram #cooking #kitchen #foodphotography #foodporn #foodgasm #foodie#instafood #foodislife #cafelife #cafesalween #salweenkitchen #yangon #myanmar
A post shared by Salween Kitchen (@salween.kitchen) on Jan 27, 2020 at 1:39am PST
ဝါကျင့်ကျင့်မီးရောင်ရယ် အပင်စိမ်းလေးတွေရယ်က လိုက်ဖက်ကြောင်းကို Café Salween က သက်သေပြထားပါတယ်။ ဆိုင်ရဲ့ နံရံလေးတွေက ဘာအရောင်မှမသုတ်ထားပဲ Original နံရံပုံစံ Design က ဆန်းသစ်နေတယ်။ စာဖတ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် စအုပ်စင်လေးထားပေးထားတယ်။
European အစားအစားကို မြန်မာအစားအစာနဲ့ တွဲဖက်ထားတဲ့ Fusion အစားအသောက်တွေရပါတယ်။ ကချင် pasta တို့ ရှမ်းခေါက်ဆွဲ pasta တို့ ပုန်းရည်ကြီး Pasta တို့ Burger ဆိုလဲ လက်ဖက် Burger တို့လို Menu လေးတွေက ကိုယ်ပိုင် creation ဖြစ်တာမို့ ဒီဆိုင်မှာပဲ ရနိုင်တဲ့ Menu လေးတွေပါပဲ။
ဆိုင်အသစ် – Market Place 6.5 Mile
5. Nam Su- Shan Tea House & Cocktails
A good Instagram spot and luscious Shan cuisine; get the best of both worlds at Nam Su. 😍 #shanfood
A post shared by NAM SU (@namsu.rth) on Feb 18, 2020 at 11:40pm PST
ရှမ်းအစားအစာ အစစ်ကို ရှမ်းပြည်ထိ မသွားပဲ ရန်ကုန်မှာ ရနိုင်ပါပြီတဲ့။ ဒီ ဆိုင်လေးရဲ့ Main Menu က ရှမ်းခေါက်ဆွဲ နဲ့ ရှမ်းဖက်ထုတ်ပေါင်းကြော်ပါပဲ။ ငှက်ပျော်ဖက်နဲ့ထုတ်ထားတဲ့ ဝက်ဦးနှောက်ပေါင်းကလဲ အရသာရှိပြီး Gin နဲ့ Tea ကို ရောစပ်ထားတဲ့ ဖျော်ရည်က Try ကြည့်သင့်ပါတယ်။
မြို့ထဲမှာ Vintage အပြင်အဆင် Decoration လေးတွေက တစ်မူထူးခြားပြီး 2020 ထဲမှာ သွားကြည့်သင့်တဲ့ဆိုင်ပါပဲ။
လိပ်စာ ဗိုလ်ကလေးစျေးလမ်း (အလယ်ဘလောက်) ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်
6. Vanilla Desert Café
A post shared by Phway Su Thu (@phwayst_) on Mar 2, 2020 at 5:55am PST
ကိုယ်တိုင်မုန့်ဝင်ဖုတ်လို့ရလို့ နာမည်ကြီးတဲ့ ဆိုင်လေးပါ။ ကိတ်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးစျေးကွာသွားပါတယ် Cupcake လေးတွေလဲ လုပ်လို့ရနိုင်ပြီး Baking Studio လေးထဲမှာ ဆရာမတွေ ကိုယ်တိုင်သင်ပြပေးလို့ တစ်ရက်ထဲနဲ့အတွေ့အကြုံအသစ်လေးရနိုင်ပါတယ်။
ဆိုင်အပြင်အဆင်လေးက Aesthetics ဖြစ်ပြီး Coffee date လုပ်လို့ကောင်းမယ့် ​နေရာလေးပါပဲ။
လိပ်စာ – ရှင်စောပုလမ်း စမ်းချောင်းမြို့နယ်
7. Living Room (Rosewood Hotel)
အသစ်စက်စက် ဖွင့်ထားတဲ့ Rosewood Hotel ရဲ့ ကော်ဖီဆိုင်ပါ။
ဟိုတယ်ကဝင်လိုက်တာနဲ့ အရမ်း Grand ကျတော့ ပြန်ပြင်ထားတဲ့ လက်ယာကို မချီးကျူးပဲ မနေနိုင်ပါဘူး။
Living Room မှာ chocolates, candies, macarons, eclairs, cakes စတာတွေလဲရတယ်။ sorbet icecream တွေလဲကောင်းတယ်နော်။
လိိိိိိိိိိိိပ်စာ – ကမ်းနားလမ်း၊ Rosewood Hotel
Monster cheese ©lodggy.com
Cheese Cake ဆိုင်ဆိုတဲ့အတိုင်း ဆိုင်ရဲ့ Signature Cheese Cake ကအသက်ပါပဲ။ အီစိမ့်ပျော့တုန်အရသာလေးနဲ့ ပေးရတဲ့ စျေးနှုန်းတန်အောင် နူးညံ့နေပြီး ထပ်စားပီး စားချင်နေတာပါပဲ။
Aesthetic အဝါကို နံရံလေးတွေမှာ ချယ်ထားပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် အရမ်းလှပါတယ်။ Coffee နဲ့ Soft Drink လဲ ရနိုင်ပြီး အေးအေးဆေးဆေး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စကားပြောချင် အဆင်ပြေတဲ့ ဆိုင်လေးပါပဲ။
လိပ်စာ – ဒဂုံမြို့နယ် အလံပြဘုရားလမ်းပေါ်
Call Me By Your Name ရဲ့ လွမ်းမောစရာ အီတလီ ~
အိမ်မှာနေရင်း Video တွေနဲ့ ခရီးသွားအရသာခံစားမယ်….
အခုေခတ္ျမန္မာေတြ လိုက္မမွီတဲ့ ကုန္းေဘာင္ေခတ္က နန္းဆန္ပံု ၁၅ ပံု
မုိးတြင္းမွာ ခရီးသြားမယ့္သူေတြအတြက္ အေကာင္းဆံုး ေနရာေတြ (ပုဂံ)
Shwe War Tun Hotel Review